Xukuumadda oo shaacisay liiska magacyada xubnaha guddiga doorashada ee cabashada laga keenay | Baahin Media Warka Somalia iyo Somalida
WARARKA MAANTA Xukuumadda oo shaacisay liiska magacyada xubnaha guddiga doorashada ee cabashada laga keenay
Xukuumadda oo shaacisay liiska magacyada xubnaha guddiga doorashada ee cabashada laga keenay
Guddiga uu Ra’iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble u saaray xaqiijinta xubnaha cabashada laga qabo ee Guddiyada Doorashooyinka ayaa soo bandhigay magacyada xubnaha ay cabashada ka muujiyeen Midowga Musharaxiinta.
Afhayeenka guddiga Ra’iisul Wasaaruhu u magacaabay hubinta xubnaha cabashada laga qabo, ahna Wasiir ku-xigeenka Warfaafinta Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala ayaa sheegay inay soo gaartay magacyada illaa 67 xubnood oo uu sheegay in cabasho laga soo gudbiyey.
Wasiir Al-Cadaalla ayaa sheegay in 67 qof ee loo soo gudbiyey lagu soo eedeeyey seddex eedeyn oo kala duwan oo ah:
1- In ay ka tirsan yihiin ciidamada qaranka dowladda federaalka Soomaaliya.
2- In ay ka mid yihiin shaqaalaha rayidka ee dowladda federaalka Soomaaliya.
3- Iyo inay yihiin siyaasiyiin iyo xubno daacad u ah madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ee Maxamed Cabdulaahi Farmaajo.
Afhayeenka Guddiga ayaa sheegay inay baaritan ku sameyn doonaan eedeymaha loo soo jeediyey xubnahaas ayna soo kala saari doonaan maalmaha soo socdo, kadibna ay soo gudbin doonaan natiijada rasmiga ah ee baaritaankooda.
Al-Cadaalla ayaa xusay in hubinta xubnahaan ay u adeegsan doonaan qodobo ay saxiixayaashii heshiiskii 27 May ka dhacay Muqdisho u dajiyeen xubnaha kamid noqonayo guddiyada doorashada ee heer federaal iyo heer gobol.
Liiskaa ayaa waxaa dhawaan Ra’iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble u gudbiyey xubnaha midowga musharixiinta, sida uu dhigayey heshiiskii ay Muqdisho ku gaareyn Dowladda Soomaaliya iyo madaxda Maamul Goboleedyada.
Previous articleDaawo: Gabar lagu la’aa Muqdisho oo meydkeeda laga dhex helay digsi weyn
Next articleDEG DEG: Rooble oo xilal cusub magacaabay, kuwa kalena ka qaaday
DHAGEYSO: Sidee Kismaayo looga Hadal hayaa Baxsashadii Wasiir Janan?
FALANQEYN: Maxaa Ku Xeeran, Olalaha Doorashada ‘Madaxweynaha KGS?
MUQDISHO: Guddoomiye DEGMO oo lagala noqday sharcigiisa dal YURUB ah”Yaa waaye gudoomiyahaas”
Qaar Ka Mid Ah Xisbiyada Dalka Oo Ka Soo Horjeestay Xadgudubyada Kenya Ku Heyso Dalka
Al-Shabaab oo weerar ka geystay deegaan ka tirsan Mudug
Shuruud cusub?: Axmed Madoobe oo shaaciyey qodobo ay DF ka rabaan ka hor shirka Garoowe
Ciidanka Kenya Oo Heegan La Geliyey, Cabsi Laga Qabo Al-Shabaab Awgeed
Daawo: Rooble iyo Daahir Geelle oo kulmay iyo Geelle oo shaaciyey arrin ay is-dhaafsadeen